များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးသားသော ကဗျာများ၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ၀တ္ထုတိုများကို အဓိကတင်မည်ဖြစ်ပြီး ရံဖန်ရံခါ ဖတ်ပြီးနှစ်ခြိုက်မိသော စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများ၏ စာများ၊ကဗျာများကိုလည်း တင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်လေကျ ဘာကိုမှ သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေး တွေးမနေဘဲ ကိုယ့်ဘက်က လုပ်နိုင်တာလေး လုပ်ပေးလိုက်ရတာနဲ့တင် သူအဆင်ပြေသွားတာမြင်ရတဲ့အခါ ကိုယ့်စိတ်မှာလည်း ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခု ရလိုက်တယ်။
ကိုယ့်အတွက် ဘာမှပြန်မရလည်း ဘ၀ကို အများအတွက် ပေးဆပ်ဖို့ အမြဲရှိနေခဲ့သူတွေဟာ သူတို့စိတ်ထားနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အကျိုးကိုတော့ ပြန်ခံစားရတာပါပဲ။
ထွေထွေထူးထူးတွေ တောင်းဆုခြွေနေစရာ မလိုဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ချင်လို့ ကူညီပေးခဲ့သူတွေလည်း ရှိသလို ဘာမှမျှော်လင့်မထားဘူးပြောပြီး ကိုယ်ပေးသလောက် ပြန်မရတဲ့အခါ အသိတရားခေါင်းပါးလိုက်တာလို့ တွေးမိတတ်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အကုသိုလ်အလုပ် လုပ်မိရုံနဲ့ အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ လုံလောက်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ကုသိုလ်အလုပ်လုပ်ပြီး ကုသိုလ်မဖြစ်တာဟာ ကိုယ့်ဖက်က စိတ်ထားမှားနေလို့၊ အကျိုးကို မျှော်ကိုးမိလို့ ဒါမှမဟုတ် ကျေးဇူးတင်ခံချင်လို့ စသဖြင့် မဖြောင့်စင်းတဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သူစိမ်းလူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ မိဘဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကလူကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကူညီနိုင်တာကို ကူညီပေးပြီးတဲ့အခါ ဘာမှ ပြန်မလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးထမ်းရွက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
ချစ်လို့ ခင်လို့ သနားလို့ စသဖြင့် အမြဲပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို အကြောင်းခံပြီး ကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အပြုအမူကရော၊ ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာပါ ရိုးသားမှုပျောက်ဆုံးနေသလို ခံစားရလို့ပါ။
Posted by Soe Htike at 3:10:00 AM
Myanmar Web Directory
ပင်ကိုယ်ရေး ကဗျာများ၊ စာများ
စကားပြောမကောင်းတာ၊ လူရာမ၀င်တာတွေကို ပြန်ကာမိဖို့ စာတွေ၊ ကဗျာတွေ ရေးပါတယ်။
များသောအားဖြင့်တော့ နားထောင်ပေးသူ အလုပ်ကို လုပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ “ကဗျာဆန်တဲ့လက်ဖျံ” ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
▼ March 2013 (67)
" ထွက်သွားကတည်းကပြန်မရောက်တော့ဘူး "
မာရီယာ သဏ္ဍာန်မတူ ငါ
ယနေ့မှစ၍သင့်အား တာဝန်မှ အပြီးအပိုင်ရပ်စဲလိုက်သည်
ဥပဒေသ (၁) ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်
ဥပဒေသ(၂) ငါးစိမ်းမမြင်ခင်ကတည်းက ငါးကင်ကိုအရင်ပြစ်ရ...
ဥပဒေသ(၃) စိတ်ချမ်းသာဖို့ လိုရင်းဖြစ်တယ်
ဥပဒေသ(၄) နဖူးစာက သူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်
ဥပဒေသ(၆) အရေပြားတစ်ထောက် ပြသနာ
ဥပဒေသ(၇) ပုံစံခွက်မှ လွတ်မြောက်ခြင်း
Justice - Michael Sandel
Justice - Michael Sandel (2)
Justice - Michael Sandel (3)
ကျွန်တော်တို့ အိမ်ဦးခန်းမှာ သူတို့ရှိမနေတော့ဘူး
ဒီမိုကရေစီနဲ့ မေးထူးခေါ်ပြော ဘ၀ပါ
မြင်းရထားသမားမိုဟာမက် - ရမ်ပန်ဂျဝါနီ (ဘာသာပြန်သူ-လ...
ရှောင်လွှဲမရသော လှိုင်းတံပိုးများအတွင်း မျောပါဖြတ်သန်းခဲ့သော ကာလတလျှောက် မာနနည်းစွာ ဦးညွှတ်မြတ်နိုး ထိုခံစားချက်ဖြင့် ပူလောင်နာ...
ပထမတစ်ခါလာတုန်းက ထုံချိုင်းဟာ “ဂျင်းဘောင်းဘီ”နဲ့ ရန်ကုန်ကို ဖြတ်လျှောက်သွားခဲ့တယ် ထုံချိုင်းဟာ ဗျူဟာကောင်းတယ် သူမလာခင် ခေါက်စား...
သြော်..ဘရူးတပ်စ်၊ မင်းလဲ ပါသကိုး။ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းကို နိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းက နိုင်ငံရေးဟူသော စကားလုံးကဲ့သို့ပင် အို...
Boomerang မင်းက ပစ်ပစ် ငါကပဲ ပစ်ပစ် ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ရောက်အောင်ပစ်လည်း တစ်နေ့ တစ်ချိန် တစ်နေရာ ရောက်အောင်ပြန်(ပြန်)လာနေကျ (မှန်းသိနေတေ...
ကမ္ဗလာည ကောင်းကင်ယံမှာ ကြယ်တွေကိုရေတွက် စိတ်ကူးနဲ့ဆက်လိုက်တော့ ပြုံးနေတဲ့သူ့ဟန် ပျက်သွားမလားစိုးစိတ်နဲ့ မျက်တောင် မခတ်ဝံ့ဘူး န...
ပို့စ်အသစ်တစ်ခုတင်တိုင်း သင့်မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးနိုင်ဖို့
www.facebook.com/lu.xoe.84. Simple theme. Powered by Blogger.